ပြည်သူ့အချစ်တော် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ နေအိမ်သို့ အန္တရာယ်ကင်း စွာဖြင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြလာတဲ့ အိကျော်ဇင် – Nyi Ma Lay
ပြည်သူ့အချစ်တော် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ နေအိမ်သို့ အန္တရာယ်ကင်း စွာဖြင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြလာတဲ့ အိကျော်ဇင်
By Ko AyePosted on March 2, 2022 March 2, 2022
မတရား အာဏာသိမ်း မှုကို လက် မခံပဲ တွန်းလှန် တော်လှန် ရင်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရ သူထဲမှာ အိန္ဒြာကျော်ဇင် လည်း အပါ အဝင်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အာဏာ သိမ်းပြီး မကြာခင် ကတည်း ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရတာကြောင့် ခုမှာ အချိန်အား​ဖြင့် တစ်နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ မိသားစု တွေ ပရိသတ်တွေ ကလည်း သူမတို့ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် လာဖို့ကို ဆုတောင်းပေး နေကြတာပါ ။
အကျဉ်းသား လွှတ်ဖို့ ကြော်ငြာတိုင်းလည်း ပရိသတ်တွေကအမြဲ သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့မျှော်မှန်းနေကြတာပါ။ အခါခါလွတ်မြောက်မယ်ဆိုသတင်းတွေထွက်ပြီးမလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့်ခုမှာတော့သူမဟာတစ်ကယ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။သူမနဲ့တူတူ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နာမည်ကျော်တော်တော်များများလည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခု မှာ ဆိုလည်း အူဝဲဟာ လွတ်မြောက်ပြီး သူမရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကို မအူဝဲရဲ့ အစ်မ အိကျော်ဇင် က အခုလိုပဲပြောပြလာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် . ။ “ မောင်လေး ပြေတီဦးနဲ့ ညီမလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ နေအိမ်ကို ကျန်းကျန်း မာမာနဲ့ ပြန်လည် ရောက်ရှိပါပြီ ။ ဒီရက်ပိုင်း ဖုန်းတွေပြန် မဖြေဖြစ် ရင်နားလည် ပေးကြပါ ရှင်.ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ပေး တဲ့ တစ်​ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ရှင် ” ဆိုပြီးး ဝမ်းသာအားရ ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။
မတရား အာဏာသိမ္း မႈကို လက္ မခံပဲ တြန္းလွန္ ေတာ္လွန္ရင္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရ သူထဲမွာ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ လည္း အပါ အဝင္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အာဏာ သိမ္းၿပီး မၾကာခင္ ကတည္း ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ခုမွာ အခ်ိန္အား​ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူတို႔ရဲ့ မိသားစု ေတြ ပရိသတ္ေတြ ကလည္း သူမတို႔ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ လာဖို႔ကို ဆုေတာင္းေပး ေနၾကတာပါ ။
အက်ဥ္းသား လႊတ္ဖို႔ ေၾကာ္ျငာတိုင္းလည္း ပရိသတ္ေတြကအျမဲ သူတို႔လြတ္ေျမာက္ဖို႔ေမၽွာ္မွန္းေနၾကတာပါ။ အခါခါလြတ္ေျမာက္မယ္ဆိုသတင္းေတြထြက္ၿပီးမလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေပမယ့္ခုမွာေတာ့သူမဟာတစ္ကယ္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာ စစ္ေကာင္စီဘက္ကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။သူမနဲ႔တူတူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့နာမည္ေက်ာ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ခု မွာ ဆိုလည္း အူဝဲဟာ လြတ္ေျမာက္ၿပီး သူမရဲ့အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို မအူဝဲရဲ့ အစ္မ အိေက်ာ္ဇင္ က အခုလိုပဲေျပာျပလာ တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ . ။ “ ေမာင္ေလး ေျပတီဦးနဲ႔ ညီမေလး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေနအိမ္ကို က်န္းက်န္း မာမာနဲ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိပါၿပီ ။ ဒီရက္ပိုင္း ဖုန္းေတြျပန္ မေျဖျဖစ္ ရင္နားလည္ ေပးၾကပါ ရွင္.ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔ေပး တဲ့ တစ္​ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ရွင္ ” ဆိုၿပီးး ဝမ္းသာအားရ ေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ ။
Previous post စီးပွားရှာရတာပင်ပန်းပေမဲ့ မိခင်နဲ့ အတူမုန့်တွေလိုက်ပို့ရင်းပျော်ရွင်ကြည်နူးရတဲ့ ရက်လေးလည်းရှိတဲ့ အကြောင်းပရိသတ်တွေဆီပုံလေးနဲ့ချပြလာတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်
Next post ထရက်ရှာလေးက(FROZEN)ဝတ်စုံလေးဝတ်ကာ အိမ်မှာမေမေဖေဖေတို့နဲ့ ပျော်စရာအချိန်လေးကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချပြလိုက်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်